Fanomezana vy |
Marika sy badge zinc firaka
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-04
Ny firaka zinc dia fitaovana marobe kokoa tsy misy fetrany, raha oharina amin'ny tsimatra enamel varahina, marika sy marika ny firaka zinc ary be ny vidiny indrindra rehefa be ny baiko na be ny haben'ny pin. Ho an'ny badge zinc amin'ny habe lehibe, mety mahia mahia kokoa amin'ny les ...
Te-hanao firavaka vy avo lenta amin'ny kojakojam-pahazavana ve ianao? Azafady mba avia hanatevin-daharana anay, Fanomezana Pretty Shiny dia hanatanteraka ny fanirianay ary hitondra ny hevitrao amin'ny tena fiainana. Nanolotra volavola misokatra goavambe ho an'ny rojo pendant, firavaka fehin-tànana, firavaka biby fiompy, firavaka krismasy ho anao izahay ...
Cloisonné Lapel Pin & Badge mahazatra
Ny badge Cloisonné dia antsoina koa hoe badin'ny enamel henjana, izay dingana nentim-paharazana tokoa ary manana tantara lava. Voalaza fa ny marika enamel mafy dia azo tehirizina mandritra ny 100 taona nefa tsy manjavona satria ny lokony dia avy amin'ny mineraly mineraly ary nodorana tamin'ny afovoany 850. Mampiasa mafy izahay e ...
Voaravaka fehikibo vy
Ny fanomezana tsara tarehy mamirapiratra dia manome medaly metaly avo lenta, farantsambola fanamby, badges, cufflink ary koa karazam-boaloboka fanao mahazatra. Araka ny fantatrao, ny fehikibo vita amin'ny fehikibo natao ho azy manokana dia tsy vitan'ny fanaka lamaody fotsiny, fa fanomezana tsara koa ho fahatsiarovana, fanangonana, fahatsiarovana, fampiroboroboana, busin ...
Pins sy marika famantarana manokana
avy amin'ny admin tamin'ny 21-05-05
Ny fanomezana tsara tarehy mamirapiratra dia manolotra karazana tsipika sy marika famantarana ny kalitaon'ny kalitao faran'izay tsara. Ny fitaovana isan-karazany dia azo ampiasaina hamoronana paingotra vy, ao anatin'izany ny varahina, varahina, varahina, vy, firaka zinc, vy vy, aliminioma, vy vy tsy misy fangarony, birao, volafotsy mihaja ary maro hafa. Izy rehetra dia q ...
Cufflink Custom manokana
Cufflink dia mpihaingo haingon-trano izay natao hanamafisana ny lafiny roa amin'ny cuffs amin'ny lobaka. Natao hampiasaina amin'ny lobaka misy zorony bokotra fotsiny izy io fa tsy misy bokotra. Cufflink mihaja sy lamaody ny mpivady dia safidy fanomezana tonga lafatra ho an'ny lehilahy izay maneho ny fandinihana ...
Tandindona na Badge amin'ny fiara vy
Ny fanomezana Pretty Shiny dia fantatra amin'ny famokarana marika manokana ho an'ny fiara, na marika marika fiara vy ary koa ny badin'ny fiara ABS. Raha ny mari-pamantarana vy dia azo atao amin'ny fitaovana sy ny famaranana isan-karazany, toy ny cloisonné vita amin'ny varahina, sary varahina vita sokitra na enamel malefaka malefaka, maty manary zinc al ...
Inona no tombony azo avy amin'ny clip vy vy? Money clip dia fitaovana iray ampiasaina amin'ny fitehirizana vola sy carte de crédit amin'ny fomba tena voafintina ho an'ireo izay tsy maniry hitondra kitapom-bola. Izy io amin'ny ankapobeny dia vy vy mivalona mivalona ho antsasaka, hany ka ny faktiora sy ny fiara mpampindram-bola ...
Golf Hat Clip Miaraka amin'ny Marker Ball
Raha jerena ny tombotsoan'ny golf amin'ny fanatanjahantena tafasaraka amin'ny fiaraha-monina, rehefa mirohotra mankafy ny habakabaka sy ny rivotra madio ny fianakaviana, dia maro ny ankizy no nivoaka nandritra ny valan'aretina. Eny, kojakoja golf mahafinaritra miaraka amin'ny clip hat dia tsy vitan'ny mankafy tsena malaza, fa manome aingam-panahy sy enco ...
Fitaovana divot misy marika fanaovana baolina
Amin'ny fikojakojana ny vondrom-piarahamonina, ny mpilalao golfa rehetra dia tokony hanao izay hahalavorary ny fanamboarana. Na dia azonao atao aza ny mampiasa ny faritra teeing hanaovana ilay asa dia mahomby kokoa ilay fitaovana fanamboarana turf. Inona no fitaovana fanamboarana ampiasaina amin'ny golf? Betsaka ny olona maniry t ...
Handravaka ny saron-tava amin'ny paiso namboarina
Na dia efa tonga aty amintsika aza ny vaksinin'ny coronavirus, fa raha mbola tsy tapitra ny areti-mifindra dia soso-kevitra ny hisaron-tava mba hiarovana amin'ny COVID mandritra ny ankamaroan'ny taona 2021. Raha tsy ny sarontava fandidiana tsotra sy ny saron-tava N95 dia afaka manome lamba miloko i Pretty Shiny saron-tava miaraka amin'ny ...
Badge Pin SDG
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-29
Ny Firenena Mikambana dia nanolo-tena hahatratra ireo tanjona kendrena maharitra (SDGs) amin'ny taona 2030. Ny fampandrosoana maharitra dia tanjona mihetsika izay niantsoana ny hetsika tamin'ny 2015 ho an'ny firenena rehetra hamongorana ny fahantrana, hanoanana, hiaro ny planeta ary hiantoka izany. ..